မန္တလေးမြို့ပြင် တစ်နေရာမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ဗေဒင်လုပ်ငန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကလူသားတွေလိုပဲ မြန်မာပြည်သားများလည်း ဗေဒင်မျိုးစုံကို စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။
ဒီပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ ကျောင်းသူ ၂ ဦးကတော့ အချစ်ရေးအကြောင်း ကြွေဗေဒင်ခေါက်နေကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဗေဒင်ဆရာကတော့ ... လာမယ့်နေ့တွေအတွက် ဆရာပြည့်နဲ့ တခါတော့ တွေ့လိုက်ပါ လို့ ဆိုထားပါတယ်။
တစ်ရာကျပ်နဲ့ အနာဂတ်ကို သိနိုင်သည် လို့လည်း အာမခံထားပါတယ်။
ခုံမှာ ကပ်ထားတဲ့ ဗီနိုင်းမှာတော့
ဆယ်တန်းမှာ ဂုဏ်ထူး ဘယ်နှစ်ခု ရနိုင်သလဲ?
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်က "မ" မှာလဲ?
ဒီဘ၀ ဆင်းရဲမှာလား ချမ်းသာမှာလား ?
အသက် ဘယ်လောက် ရှည်မှာလဲ?
စသဖြင့် မေးခွန်း ၇၀ ၀န်းကျင် ရေးထိုးထားပါတယ်။
ကြမ်းပြင်မှာ ခင်းထားတဲ့ ဗီနိုင်မှာတော့
သူငယ်ချင်းကို ချစ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား?
စသဖြင့် မေးခွန်း တစ်ရာလောက် ရေးထိုးထားပါတယ်။
ဆရာပြည့်ရဲ့ လက်ထောက်ကို ကိုယ်မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းနံပါတ်ပေး၊ ပြီးရင် ကြွေပစ်ရမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဆရာပြည့်လက်ထောက်ရှေ့မှာတော့ ကတ်ပြားတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကြွေပစ်လို့ရလာတဲ့ ဂဏန်း(?)ကို အဲဒီကတ်ပြားမှာ ရေးထားတာတွေ ကိုးကားပြီး ရှေ့ဖြစ်ခန့်မှန်းတာဟာ ကြွေဗေဒင်ဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ကွမ်းယာဆိုင် – http://moemaka.com/?p=32404